Inkqubo yokulandela umkhondo yeRadar Covid iyafumaneka kwiCCAA IPhone iindaba
Inkqubo yokulandela umkhondo yeRadar Covid iyafumaneka kwiCCAA
UPedro Sánchez namhlanje unike uLuntu oluZimeleyo usetyenziso lokulandela umkhondo Irad Covid, ukuze uLuntu ngalunye luyisebenzise kwinkqubo yalo yezempilo. Insiza esekwe kuGoogle -Apple yokulandela umkhondo yeGoogle. Iindaba ezimnandi ... isiqingatha.
Iindaba ezimnandi zezokuba uvavanyo lweapp kwisiqithi se la Gomera, kwaye iziphumo zihle kakhulu. Ngokobuchwephesha iyasebenza kwaye iyasebenza. Iindaba ezimbi zezokuba kusezandleni zopolitiko. UPedro Sánchez wazise uLuntu oluZimeleyo ukuba banokuba nalo (okanye hayi ...). Ngoku kufuneka silinde kwaye sibone ukuba uluntu ngalunye lwaseSpain lusisebenzisa njani esi sixhobo sokulandela umkhondo, silungelelanisa inkqubo yabo yezempilo, nokuba bayasisebenzisa na okanye hayi. Kwaye ukuba baya kudityaniswa ukuze bawele idatha phakathi kwemimandla eyahlukeneyo yaseSpain. Ndiyoyika ...
Umongameli kaRhulumente Pedro Sánchez Ukho namhlanje entlanganisweni kaMongameli woLuntu oluZimeleyo olubanjelwe eSan Millán de la Cogolla. Kwaye esinye sezihloko abajongane nazo kukusungulwa ngokusesikweni kwesicelo seRadar Covid.
Le app, esekwe kudumo Google-Apple API Ukulandela umkhondo osasazekayo ngeBluetooth, kuvavanya isiqithi saseLa Gomera kangangeeveki ezimbini. Iziphumo azidluli, kodwa kubonakala ngathi zilungile kakhulu, kuba namhlanje usekela-mongameli wesithathu uNadia Calviño, uqinisekisile ukuba iRadar Covid ivavanywe "ngempumelelo" kwaye ikulungele ukwaziswa.
Ukuza kuthi ga ngoku, ugqibelele. Ingxaki iza kukuba endaweni yokuzazisa ngokwabo kwinqanaba likarhulumente, uLuntu ngalunye oluzimeleyo Unenkululeko yokuthatha isigqibo sokuyisebenzisa okanye ungayisebenzisi kwindawo yakho. Kuya kufuneka uyilungelelanise nenkqubo yakho yezempilo, kwaye uyiphumeze.
Umbuzo wokuqala oza engqondweni yinto eyenzekayo kubasebenzisi abathi, ngenxa yezizathu ezithile, batshintshe uluntu oluzimeleyo. Ngaba umsebenzisi ovela eAragon onxibelelana nomnye waseCatalonia uya kufumana isilumkiso malunga nosulelo olunokwenzeka ukuba isiCatalan sisenza isilumkiso? Andizukubheja i-Euro ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Inkqubo yokulandela umkhondo yeRadar Covid iyafumaneka kwiCCAA
Iyaqhubeka isithi yinguqulelo yolingo kuluntu.
Ingxaki kukuba kufuneka ibekwe embindini. Uluntu ngalunye luya kwenza le nto luyifunayo kwaye ekugqibeleni alunakunceda. Ndiyakuvuyela ngokulahla imali.
Nge-iOS 14 unokukhetha ukuba iiapps ezintsha ezikhutshelweyo ziya kuya phi